China Embroidered Patches ifektri abakhiqizi | SJJ
Isikhumba esifekethisiwe ngokwezifiso, izimpawu noma ama-epaulettes zilungele ezempi, iBoy Scout, isigqoko, isikhafu nayo yonke imifaniswano. Siphinde singenza ama-patches we-3D nama-patches e-chenille.
Imifekethiso iwubuciko bomlando omude, sekuyiminyaka eyizinkulungwane ezintathu iziphendukela kwemvelo kuze kube manje, kusukela ekuqaleni okufekethisiwe okwenziwe ngesandla kuze kube manje umshini wokuzenzakalela owenziwe ngomshini. Isidingo sokufekethiswa sanda futhi usuku nosuku, ikakhulukazi iziqeshana ezifekethisiwe zisetshenziswa kakhulu kwezempi, umnyango wezomlilo wamaphoyisa, ezokuphepha, umnyango kahulumeni, iklabhu lezemidlalo nethimba, umfaniswano osemthethweni wabathunywa, isigqoko se-neckerchief, nakho kungafakwa emakepheni futhi izikhwama.
Inqubo yethu yokufekethisa ivela eTaiwan kusukela ngo-1984, imithungo iminyene kakhulu, futhi intambo yomngcele wokugcina womugqa unamathela ngemuva ngemuva okuqinile. Sinabaculi nochwepheshe abanokuhlangenwe nakho okugcwele, singenza umsebenzi wobuciko wokukhiqiza ngokusho komklamo wakho. Thola ikhambi elingcono kakhulu lokufeza ukwakheka kwakho kungakapheli amahora angama-24. Ngakho-ke khetha thina, kulula futhi ngokushesha uthole ukwakheka kwakho. Futhi ifektri yethu yaseDongguan inemishini esezingeni eliphezulu engama-58, umshini owodwa ungathola ama-20-30pcs afanayo afekethisiwe we-logo ngasikhathi sinye. Lokhu kusebenza okuphezulu kungasisiza ukuthi sinikele ngamakhasimende ethu ngentengo eshibhile yokuhlobisa. Imibala engafika kwengu-12 ngesiqephu esisodwa, imibala eyahlukahlukene yokwenza ukwakheka kwakho kucace.
Singumboni ovunyelwe yiDisney, ifektri evunyelwe yi-United States Scout, ibutho laseJapan, ifektri egunyaziwe yomoya wokuzivikela, futhi sabambisana nezinkampani eziningi ezidumile zokugqoka. Ngokuqinisekile uzokwaneliseka ngekhwalithi yethu. Sicela ungangabazi ukuxhumana nathi futhi wenze iziqeshana zakho ezifekethisiwe ezenziwe ngokwezifiso.
** Intambo: 252 imicu yombala wesitoko / intambo ekhethekile yensimbi yensimbi nesiliva lensimbi / umbala oguqula intambo ebucayi ye-UV / ukuvutha entanjeni emnyama
** Isendlalelo: twill / velvet / felt / silk noma enye indwangu ekhethekile
Ukusekelwa: Insimbi ivuliwe, iphepha, ipulasitiki, iVelcro, ingcina
** Idizayini: ukwakheka okwenziwe ngezifiso nokuklama
** Umngcele: umngcele we-merrow / umngcele wokusika we-laser / umngcele wokusika ukushisa / umngcele wokusika ngesandla
** Usayizi: egcizelele
** Ukulethwa: Izinsuku eziyi-3-4 zesampuli, izinsuku eziyi-10 zokukhiqiza ngobuningi
Langaphambilini Izinhlamvu zemali Zempi
Olandelayo: Imisila yenkomo ebizayo - enezinhlamvu ezigelezayo noma eziyize
Intengo ye-China Badge Patch ne-Embroidered Badge
I-China Best Boy Scout Patches
Izilinganiso ze-China Best Boy Scout Patches
I-China Abahlinzeki Abakhulu Bama-Scout Abahlinzeki
Ama-Patches afekethisiwe ngokwezifiso
Ama-Patches afekethisiwe ngokwezifiso Awekho ubuncane
Ngokwezifiso Embroidery Patch
Ukuklama Amachashazi Afekethisiwe
Ama-Patches we-Logo efekethisiwe
Izimagqabha zamagama ezifekethisiwe
Amachashazi afekethisiwe Ayathengiswa